အမြဲတမ်းသတိရှိပါ — Steemit
konyi (55)in #esteem •3years ago
တချိန်တုံးက.. အစားအစာအတွက် သားကောင်းတွေကိုရှာဖွေမစားသောက်နိုင်လောက်အောင်၊ အိုမင်းရင်ရော်နေတဲ့ ခြင်္သေးတစ်ကောင်ရှိခဲ့ပါတယ်၊ ဒါကြောင်းသူက သူကိုယ့်သူစဉ်းစားကြည့်ပါတယ်၊ ငပ်မွတ်ပြီးမသေနိုင်ရလေအောင် ဝမ်းဝရေးအတွက် ငါတစ်ခုခုလုပ်မှရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့၊ သူစဉ်းစားပြီး စဉ်းစားနေခဲ့ပါတယ် နောက်ဆုံးမှာတော့ သူကအတွေးတစ်ခုရလာခဲ့ပါတယ်၊ နောက်ပြီးသူဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါသေးတယ်၊ နေမကောင်းဟန်ဆောင်ပြီးတော့ ဂူခေါင်းထဲမှာနေမယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့၊ အေးဒီအချိန်မှာ၊ ငါကို နေမကောင်းတဲ့အတွက် သတင်းမေးရန်၊ လာကြတဲ့သူတွေက ငါအတွက် သားကောင်းဘဲပေါ့၊
ဒါကြောင်း ခြင်္သေးအိုက သူရဲ့အစီစဉ်းတွေကို လက်တွေ့အကောင်ထည်ဖော်ခဲ့ပါတယ်၊ နောက်ပြီး သူရဲ့အကြံဉာဏ်နဲ့စတင်ခဲ့ပါတယ်၊ သူရဲ့အကြံဉာဏ်တွေကတော့ သားကောင်တွေကိုဖမ်းပြီးစားမယ်ပေါ့၊ ဒါပေမဲ့ မကောင်းတဲ့အကြံဉာဏ် မတည်မြဲပါဘူး၊ တစ်နေ့၌ နေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့ ခြင်္သေးအိုဆီသို့ မြေခွေးတစ်ကောင်လာပြီးတော့ သတင်းလာမေးပါတယ်တဲ့၊ အစကတည်း လိမ်မာပါးနပ်တဲ့ မြေခွေးက ဂူခေါင်းအပြင်ကနေရပ်ပြီး သူရဲ့ အခြေနေကို စောင့်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်တဲ့၊ သူရဲ့စူးစမ်းမှု့တွေနဲ့ အမှန်ကိုသိလာခဲ့ပါတယ်၊ ဒါကြောင်းမြေခွေးက ခြင်္သေးအိုကို အပြင်သို့ထွက်လာခဲ့ဆိုပြီးခေါ်လိုက်ပြီးတော့ ဘယ်နေလဲ နေလို့ကောင်းရဲ့လားပေါ့၊
ခြင်္သေးကပြန်ပြောခဲ့ပါတယ် ခုတလော ငါလုံးဝကိုနေမကောင်းတာပါဗျာ၊ ဒါနဲ့ မိတ်ဆွေမြေခွေးက ဘာဖြစ်လို့ အထဲကိုမဝင်ရတာလဲ? အင် ဒါနဲ့ ကျွန်တော်အမြင်ဖြင့် ခြင်္သေးဂူထဲသို့ဝင်သွားတဲ့ အကုန်လုံးသားကောင်တွေပြန်ထွက်မလာခဲ့ကြဘူး၊ ဒါကြောင်း ငါအထဲသို့ဝင်လာဖို့သတ္တိမရှိဘူးဆိုပြီး မြေခွေးက တုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်တဲ့။ ဒါကြောင်းအဓိကပြောချင်တာက အခြားသားကောင်းတွေထက် မြေခွေးက သတိကောင်းကောင်းထားနိုင်တာပေါ့။
အခြေနေအရပ်ရပ်မှာ ပထမဆုံးမစတင်ခင် မင်းတို့သိဉာဏ်မျက်စီးကိုဖွင့်ပြီးတော့ သတိဝိရီးယရှိုရှိနေသင့်ပါတယ်။ Thank for reading.
3 years ago in #esteem by konyi (55)